Filtrer les éléments par date : mardi, 18 juin 2019
mardi, 18 juin 2019 21:11
Fankalazana ny Fetim-pirenena: Hisy fampisehoana fitaovam-piadiana raitra amin’ny 26 jona ?
Hiverina ho hita etsy Mahamasina mandritra ny matso, fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantenam-pirenana sady fetin’ny foloalindahy, ireo fiara mifono vy, naseho vahoaka voalohany ny 19 janoary 2019, andro nanaovan’i Andry Rajoelina fihanianana nandraisany ny fahefana feno maha filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara vaofidim-bahoaka azy.
mardi, 18 juin 2019 20:45
Sécurité: Dotation de 4x4 pour les forces de l'ordre
Une centaine de véhicule 4x4 sont partis de Toamasina vers Antananarivo la nuit du dimanche. Des véhicules destinés, en partie, pour les forces de l'ordre.
Ils sont immatriculés déjà en plaque rouge.
Les 4x4 portent l'étiquette concessionnaire Sodiatrans.
mardi, 18 juin 2019 20:33
Fanapoahana tsipopoaka: Azo atao any an-tokantrano fa voarara amin’ireo toerana vory vahoaka, hopitaly, toby miaramila …
Namoaka fanambarana ao amin’ny pejiny Facebook, androany, ny ministeran’ny fiarovam-pirenena milaza fa “ho amin’ity taom-pankalazana ny faha-59 ny tsingerintaonan’ny fahaleovan-tena sy ny nijoroan’ny Foloalidahy Malagasy ity dia afaka atao ny mivarotra sy ny manapoaka izany any an-tokantrano misy azy tsirairay avy”.
Nanipika mazava kosa ilay fanambarana fa “raràna mafy arak’izany ny fanapoahana izany eny amin’ireo toerana vory vahoaka, hopitaly sy ireo toerana saro-pady toy ny manodidina ny Toby misy ny mpitandro filaminana ary ireo toerana manakaiky ny tobin-dasantsy samihafa”.
Ao anatin’ny ivon’ny fankalazana ny fahaleovantena isika izao ka mandritra izany dia tsy azo atao ny mandika ireo toerana izay voalaza fa tsy afaka hananterahana izany, mihatra avy hatrany ny lalàna ho an’ireo izay mihoa-pefy amin’izany.
Ho fitandrovana ny ratra na ny aina ho an’ny rehetra ary koa ho fanomezana hafaliana ho an’ireo ankizy tia milalao izany no anton’ireo fepetra ireo.
mardi, 18 juin 2019 20:18
DRCC Analanjirofo: Nanolo-tanana amin’ny fampitaovana ireo zanaky ny faritra
Taorian'ny fametrahana an'i Ndiamahazo Mickaelys Kamy ho Talem-paritry ny serasera sy kolontsaina (DRCC) ao Analanjirofo, dia miditra an-tsehatra manampy ara-pitaovana ireo fikambanana samihafa amin'ny maha zanak'Analanjirofo an'i Ndiamahazo Mickaelys Kamy.
Nanolotra solosaina efatra ho an’ny DRCC Analanjirofo ny LCDM, izay fikambanana manampy ireo olona voan'ny aretina “drépanocytose”, izay miara-miasa amin'ny Université Paris-Sud any Frantsa.
Nitondra anjara biriky ihany koa Atoa Félix, izay zanak’i Fenoarivo Atsinanana, izay mahatsiaro manana adidy amin'ny fampiroboroboana ny lafin'ny serasera sy ny kolontsaina any an-toerana tamin'ny fanomezana solosaina entin-tanana sy fandraisam-peo ary fanamafisam-peo samihafa ihany koa.
mardi, 18 juin 2019 20:06
Ambatofinandrahana: Nankahery ireo andian-tafika tany an-toerana ny Jeneraly Richard Rakotonirina
Manomboka miverina amin’ny laoniny ny fandriampahalemana raha ny fiainan’ny vahoaka andavanandro amin’ireo faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana. Nivoitra io tamin’ny fidinana ifotony nataon’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Richard Rakotonirina tamin’ireo faritra nametrahana ny andian-tafika ZRPS (Zone Rurale Prioritaire de Sécurité).
Ambatofinandrahana sy ny manodidina azy no notsidihiny ny herinandro teo. Nankahery ireo andian-tafika tany an-toerana ny tenany, ary koa nijery ny toerana ahafahana mametraka ny Tobim-pamaharana na ny « Base Opérationnelle Avancée ».
mardi, 18 juin 2019 19:54
Tanambao-Daoud: Tovolahy mpivahiny roa matin’ny fitsaram-bahoaka
Fahafatesana tovovavy iray tamin’ny fomba feno habibiana tao Andramanolotra no niafara tamin’ity fitsaram-bahoaka ity. Nanjavona tsy hita ilay tovovavy tamin'ny herinandro lasa teo iny. Izy efa maty tamin'ny fomba feno habibiana vao hita, ary ny loza dia nasaly tamin'ny afo ity fatim-behivavy ity.
Voasambotra omaly ireto roalahy voarohirohy tamin'izany ka notazonina vonjimaika tao amin'ny biraon’ny Kaominina Tanambao-Daoud Sambava.
Tonga tao ny fianakavian’ilay tovovavy androany dia nangataka ny hanolorana amin'izy ireo ny namono ny havan'izy ireo. Tsy nety ny Ben’ny tanàna Totofeno Modeste Philbert fa nandrara satria tsy mety ny fitsaram-bahoaka. Rehefa izay dia niditra an-keriny tao amin’ny efitra nitazonana azy roalahy ny andian’olona nentin-katezerana dia fitsaram-bahoaka no niafarany.
Nampandrenesina ny zava-misy ny Zandarimaria ary nandefa iraka haingana any an-toerana.
mardi, 18 juin 2019 19:44
Itaosy: Mitarazoka ny fanamboaran-dalana
Naharay fitarainana avy amin’ny mpampiasa ny làlana mizotra mankeny Itaosy iny ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana ary ny Asa Vaventy, ka nidina ifotony nijery ny olana mampitarazoka ny fanamboarana eo amin’ny faritra sampanana Andranonahoatra.
Nilaza ny avy eo anivon’ity ministera ity fa hentintra ny amin’ny fanaraha-maso ireo tetikasa fanamboaran-dàlana ankehitriny. Miova ny fomba fiasa, Tsy ekena intsony ny kitranoantrano sy ny alasafay.
mardi, 18 juin 2019 19:42
Kohen Rivo Lala : “Amin’ny 2023 indray mihaona !”
Amin’ny 2023 indray mihaona. Mbola hanolotena ihany i Kohen amin’ny 2023 ho filoham-pirenena. Fanambarana nataon’i Lala Randriatianarivo, fantatra amin’ny anarana hoe Kohen Rivo Lala, ao amin’ny pejy fesibokiny io.
Kandida solombavambahoaka farany teo, tao Antsirabe II, i Kohen Rivo Lala. Niaiky ny fahareseny izy, ary nisaotra ireo mpifidy tamin’iny fifidianana iny. Malalaka ny safidy fa tsy terena handray ny fahasoavana avy amin’i Kohen ny olona, hoy izy.
Nanipika moa i Kohen Rivo Lala fa « Tsy mampiasa ny Ctic Ctac Dou amin’ny fifidianana » ny tenany satria « tsy terena ny handray ny fahasoavana entin’i Kohen ».
mardi, 18 juin 2019 17:03
RN5A Ambilobe-Vohémar: Jerem-potsiny ny taingim-be ataon’ny Bajaj
Efa misy fihatsarana ny lalana avy eto Ambilobe mandeha Vohémar. Manararaotra mihazakazaka niasa aty ambanivohitr’i Betsiaka, izay eo amin'ny 30 km miala an’Ambilobe tampontanana ireo taxi Bajaj, ary samy manao taingimbe mihoampapana .
Nanazava ireo mpitandro filaminana teo amin'ny « Barrage de contrôle » ary ny « motard » tsy lavitra teo, izay niasa ny 18 Jona 2019, fa « efa tsy voatazonay intsony ny fanaovana taingimbe nanomboka tamin'ny fanatsarana ity lalana ity ».
mardi, 18 juin 2019 13:54
Mpitandro filaminana: Nahazo fiara 4x4 maromaro fampitaovana
Niala tao Toamasina ary nakarina any Antananarivo ny alahady alina sy omaly alatsinainy maraina ireo fiara 4x4 zato mahery nafaran'ny fanjakana homena ny mpitandro ny filaminana ny sasany. Efa natao takelaka mena avokoa izy ireo.